Apple Park waa mid kamid ah dhismooyinka ugu qaalisan aduunka | Wararka IPhone
Apple Park waa mid ka mid ah dhismooyinka ugu qaalisan adduunka
ka shaqaalaha Apple waxay leedahay faa iidooyin aysan lahayn shaqaalaha kale ee shirkadaha kale. Laakiin nasiib wanaag waa kuwa ka shaqeeya xarumaha waaweyn ee Apple Big. Kan ugu dambeeya, Apple Park, wuxuu leeyahay in kabadan 70 hektar oo leh dhisme dhexe hooyanimada marka lagu daro tiro badan oo waxyaabo ah in gudaha laga sameeyo oo loogu talagalay nasashada iyo raaxeysiga shaqaalaheeda. Qiimeeyaha degmada Santa Clara, oo ah meesha ay ku taallo Cupertino, ayaa hubiyay in dhismaha lagu qiimeyn karo 3.6 bilyan oo doolar, laakiin haddii aan ku darno dhammaan qiimaha gudaha ee aan ku darno kumbuyuutarrada, tiknoolajiyada iyo kuwa kale, qiimaha ayaa gaaraya 4.17 bilyan, waa mid ka mid ah dhismooyinka ugu qaalisan adduunka.
Apple Park: waa dhisme aad qaali u ah laakiin leh dareen badan
Dhismaha Apple Park waxaa ku dhawaaqay Steve Jobs sanadkii 2006 isaga oo wali ah madaxa shirkada. Laga soo bilaabo ku dhawaaqidii dhacdadii ugu horreysay ee dadweynaha ee tiyaatarka Steve Jobs, 11 sano ayaa laga soo gudbay, sannado ay kaamil ahaanta iyo faahfaahinta ay fure u ahaayeen gaaritaanka mid ka mid ah dhismooyinka ugu waara adduunka. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira waxyaabo badan oo aan la aqoon oo aan wali la xallin intii lagu jiray dhismaha dhismaha.
Qiimeeyaha Canshuurta ee Santa Clara County wuxuu xaqiijiyey in Apple Park ay ku fadhido $ 3.6 bilyan. Laakiin xitaa haddii ay taasi tahay qiimaha dhabta ah, xisaabinta canshuuraha guryaha David Ginsborg, oo ah kaaliyaha la-taliye, ayaa sidoo kale tixgeliyay kombuyuutarrada, qalabka guryaha iyo qalabka dayactirka ee xerada, oo qiimahoodu uu keenay 4.17 hal bilyan oo doolar.
Xiisad ahaan, Apple waa inay bixisaa 40 milyan sanadkii canshuurta guryaha iyo aayaha Cupertino 10 Milyan dollar si loo maalgeliyo dugsiga hoose ee degmada, 6 Milyan dollar waaxda dabka. Iyo in yar oo ah 5% canshuurta guryaha ee Apple Park waxaa lagu maalgeliyaa Golaha Magaalada Cupertino kharashyada kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Apple Park waa mid ka mid ah dhismooyinka ugu qaalisan adduunka
Gabar Mareykan ah iphone 6 ayaa si lama filaan ah u qaraxday
Amazon waxay qorsheyneysaa inay soo saarto Echo cusub oo kula tartamaya HomePod tayada codka